Amathuluzi Wokumaketha ayi-9 Okukusiza Ngokushesha Ukwakha Okungcono Kwe-Blog | Martech Zone
NgeSonto, uJanuwari 27, 2019 NgeSonto, uJanuwari 27, 2019 U-Becky Holton
Liyini iphuzu lokumaketha kokuqukethwe?
Ingabe kumayelana nokwakha okuqukethwe okuhle nokukuphromotha kuziteshi eziningi ukuze unake izilaleli zakho?
Well leyo yingxenye enkulu kunazo zonke. Kepha ukumaketha kokuqukethwe kungaphezulu kakhulu kwalokho. Uma ulinganisela indlela osebenza ngayo kulezo zinto eziyisisekelo, uzohlola ama-analytics futhi uzobona ukuthi okuqukethwe akukhange ukugcwala okukhulu.
I-ClearVoice ihlolisise abathengisi abangu-1,000 XNUMX ukuthola ukuthi yiziphi izinselelo ezinkulu zokuqukethwe. Uhlu lwezinselelo ezinkulu kakhulu lubandakanya ikhwalithi yokuqukethwe, ukudala nokwengeza okuqukethwe, kepha kwaqhubeka.
Isikhathi, ikakhulukazi, kwakuyinselele enkulu kunazo zonke. Kepha abathengisi baphinde balwa nemibono yokukhiqiza, ithalente, ukusatshalaliswa, isu, ukuzibandakanya, kanye nokuvumelana. Lapho zonke lezi zinto zibekwa ngesikhathi esibekiwe, sifika enkingeni.
Ngakho-ke siyabona ukuthi ukumaketha kokuqukethwe, empeleni, kuyinkimbinkimbi kakhulu kunalokho iningi lethu elilindele. Udinga ukungena ku-mindset eqhutshwa kahle ukufeza yonke imigomo ngaphakathi kwemikhawulo yesikhathi oyisethile.
Amathuluzi afanele asiza ngalokho!
9 Amathuluzi Wokumaketha Okuqukethwe Okukusiza Ukunqoba Izithiyo Zesikhathi
Hlangana no-Edgar - Ufuna ukugxila ekuthuthukiseni okuqukethwe okuhle kwebhulogi. Uma othile (noma okuthile) anganakekela ingxenye yokusabalalisa, ungathola isikhathi esiningi sokugxila kokuthunyelwe kwakho okulandelayo. U-Edgar uyithuluzi eliwusizo olidingayo. Uzohlelela okuthunyelwe kusistimu yayo, bese u-Edgar ezobhala ngokuzenzakalela izibuyekezo zesimo se-Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, ne-Pinterest. Ithuluzi lihle ekuvuseleleni okuqukethwe okuhlala kuluhlaza. Lokho kuzoqinisekisa ukuthi umkhiqizo wakho uhlala uhambisana nanoma ungakhiqizi okuqukethwe okusha kaningi ngendlela ongathanda ngayo.
I-Quora - Uma uswela imibono yezihloko ongabhala kuzo, ibhulokhi lomlobi lingadla isikhathi esiningi kakhulu. Uyithathaphi le mibono? Ungabona ukuthi izimbangi zakho zibhala ngani, kepha awufuni ukuzikopisha. Nansi inketho engcono: bona ukuthi izithameli zakho ezihlosiwe zizibuza ngani.
Hlola imibuzo esigabeni esifanele se-Quora, futhi uzothola imibono embalwa yesihloko ngokushesha.
Pablo - Izinto ezibukwayo zokuqukethwe kwakho zibaluleke kakhulu. Uzodinga ihluzo noma izithombe ezahlukahlukene ze-Facebook, i-Pinterest, i-Google +, i-Instagram, nazo zonke ezinye iziteshi oqonde kuzo.
NgoPablo, leyo ngxenye yomsebenzi wakho kulula. Ungakha ukubonakala okuhle kokuthunyelwe ngakunye. Kunezithombe ezingaphezu kuka-50K kulabhulali, ngakho-ke ungathola kalula esifanelana nokuqukethwe kwakho. Ngemuva kwalokho, ungazenza ngezifiso ngezingcaphuno ezivela kokuthunyelwe, bese ukhetha usayizi ofanele wezinethiwekhi ezahlukahlukene zokuxhumana.
Uhlelo lokusebenza lwe-Hemingway - Ukuhlela kuthatha isikhathi esiningi, akunjalo? Lapho usuqedile ukubhala iposi lebhulogi, wena = ufuna ukulidlula ngokushesha bese ulishicilela. Kepha kufanele unake kakhulu isigaba sokuhlela; ngaphandle kwalokho uzibeka engcupheni yokushicilela okusalungiswa okungaphelele okunesitayela esididayo.
IHemingway App yenza le ngxenye yomsebenzi wakho ibe lula njengoba ithola. Izobamba amaphutha wohlelo lolimi nesipelingi. Kepha akupheleli lapho. Ithuluzi lizophinda likuxwayise ngobunzima, izandiso, nezinye izinto eziwunciphisa umyalezo.
Vele ulandele izincomo bese wenza okuqukethwe kwakho kufundeke kalula.
I-ProEssayWriting - Amathuluzi abalwe ngenhla akusiza ukuphatha izinto ezahlukahlukene zomkhankaso wakho wokumaketha okuqukethwe, kepha kuthiwani ngengxenye yokubhala? Uyazi ukuthi awukwazi ukuthembela kwisoftware uma kuziwa kulokho.
Kepha kwesinye isikhathi noma kwesinye, ungahle ubhajwe. Unehlelo lokuqukethwe oluhlelwe kahle kepha awukwazi ukuphatha ukubhala konke okuthunyelwe ngesikhathi. Mhlawumbe uphakathi nendawo yombhali. Mhlawumbe kuyimpilo nje eyenzekayo futhi kufanele ubeke ukubhala kwikhefu.
Esimweni esinjalo, insizakalo yokubhala yobungcweti ingasiza kakhulu. I-ProEssayWriting iyinkundla lapho ungaqasha khona ababhali abangochwepheshe abavela ezigabeni ezahlukahlukene. Uzobanikeza imiyalo futhi bazoletha okuqukethwe okuyingqayizivele okungu-100% ngomhla wakho wokugcina.
Izindatshana ezihamba phambili - Ama-Essay amahle kakhulu enye insizakalo yokubhala okuqukethwe enedumela elihle kakhulu. Unga-oda okuthunyelwe kwebhulogi kunoma yisiphi isihloko, unikezwe iqiniso lokuthi inkampani iqasha ababhali abavela ezindaweni ezahlukahlukene zokufunda. Ama-Essay amahle kakhulu alungele amaphepha amhlophe asezingeni eliphezulu nama-eBooks, kepha futhi ungathola izingcezu zokuqukethwe ezilula noma nini lapho uzidinga.
Le sevisi ikuvumela ukuthi usethe izikhathi zokugcina ezifushane (kusuka ezinsukwini eziyi-10 kuye emahoreni ama-3), bese uthola isiqinisekiso sokulethwa okufika ngesikhathi.
Amaphepha Aphakeme - Uma uhlela ukuthumela ingxenye yokubhala kokuqukethwe esikhathini eside, ama-Superior Papers ayindlela enhle. Uma ukhetha ubulungu bukaRuby noma beDayimane, uzobe uthola izaphulelo njalo. Futhi, uzosebenza nababhali abahamba phambili beqembu.
Uma uqala ukusebenzisana nomlobi othile futhi uthanda lokho okutholayo, ungaqasha isazi esifanayo futhi.
Ngaphezu kokubhala usizo, ama-Superior Papers nawo ahlinzeka ngezinsizakalo zokuhlela ezisebenzayo.
Insizakalo Yokubhala Yesabelo seBrill - Le yinkonzo yokubhala yaseBrithani. Uma ibhulogi yakho ihlose izethameli zaseBrithani, umbhali waseMelika ngeke asithole isitayela. Uma kunjalo, Isabelo seBrill siyisinqumo esingcono kakhulu.
Ababhali baletha okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu kuzo zonke izinhlobo zezihloko. Ngokungeziwe kokuthunyelwe kwebhulogi, ungaphinde u-ode izifundo zocwaningo, izethulo ze-PowerPoint, amaphrojekthi wokuqamba imidwebo, nokuningi.
Imibhalo yase-Australia - Imibhalo yase-Australia iyinhlangano yokubhala efana nalena embalwa esishilo ngenhla. Umehluko, njengoba negama uqobo lisho, ukuthi ubhekise emakethe yase-Aussie. Ngakho-ke uma udinga ababhali bakulelizwe ukushaya isitayela esifanele, yilapho ozobathola khona.
Izintengo sezivele ziyabiza, kepha inkampani futhi inika izaphulelo ezinhle kubasebenzisi abajwayelekile.
Ukonga isikhathi kuyinto enkulu. Uma wenza umkhankaso wakho wokumaketha okuqukethwe ukhiqize kakhudlwana, uzoqala ukuthola ithrafikhi futhi uqinisekise izethameli ukuthi zithathe isinyathelo. Sethemba ukuthi amathuluzi abhalwe ngenhla azokusiza ukuthi ufike lapho.
Tags: imibhalo yase-Australiaama-eseyi amahle kakhuluBrillinsizakalo yokubhala isabelo se-brillUkukhangisa Okuqukethweizinsiza zokumaketha okuqukethweizinsizakalo zokuqukethweuhlelo lokusebenza lwe-hemingwayhlangana no-edgarpabloamaphepha aphezulu
U-Becky Holton uyintatheli futhi uyi-blogger. Unentshisekelo kubuchwepheshe bezemfundo futhi uhlala ekulungele ukusekela ukukhuluma okufundisayo.
Ungakusebenzisa Kanjani Ukufinyeleleka Kwe-imeyili Kwezobuchwepheshe Obusizayo